Jami: sehatra vaovao ho an'ny fifandraisana maimaimpoana sy iraisan | Avy amin'ny Linux
Jami: sehatra vaovao ho an'ny fifandraisana maimaimpoana sy iraisan'ny rehetra
Jami no anarana vaovao an'ny fampiharana taloha antsoina hoe Ring. Ny amin'ireo tranga 2 teo aloha dia niresaka momba izany isika. Ny fotoana voalohany tao amin'ny lahatsoratra 2016 mitondra ny anarana «Ring: Fanoloana ny Skype amin'ny GNU / Linux»Ary avy eo amin'ny iray hafa tamin'ny taona 2018 antsoina hoe«Fampiharana tena ilaina sy manan-danja amin'ny GNU / Linux 2018/2019".
Nanomboka tamin'ity taona ity, 2019, ny tetikasa fampiharana Ring dia nanjary Jami. Mba ho lasa tetikasa malalaka kokoa sy manerantany, misokatra bebe kokoa amin'ny vondron'ireo mpampiasa sy mpamorona rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra ary ny sehatry ny orinasa sy ny orinasa.
Ireo mpamorona ankehitriny dia mamaritra an'i Jami ho:
"Jami dia sehatra fifandraisana maimaimpoana sy manerantany izay miaro ny tsiambaratelo sy ny fahalalahan'ny mpampiasa azy."
Ary ao amin'ny azy vavahadin-tserasera ofisialy vaovao mazava hoy izy ireo fa fampiharana izao:
"Natao ho an'ny besinimaro ary koa ho an'ny indostria, Jami dia mikendry ny hanome fitaovana ho an'ny mpampiasa azy rehetra fitaovana maimaimpoana sy malalaka ary azo antoka, ary miorina amin'ny maritrano zaraina izay tsy mila manampahefana na mpizara foibe hiasa."
Jami amin'ny lafiny iray dia azo ankasitrahana ho fampiharana fandefasan-kafatra tsotra, izany hoe fampiharana ho an'ny hafatra an-tsoratra, antso an-tsary sy horonan-tsary, famindrana rakitra, fihaonambe videoconferansa, ankoatry ny zavatra hafa. Fa inona no tena ataony Ny maha-hafa an'i Jami dia ny teknolojia fototra manohana azy.
Ho fanampin'ny famelana ankehitriny ny fandraisana anjara maimaimpoana sy malalaka ho an'ny fampandrosoana izany, ary ny fandraisana mahomby kokoa ny fanampiana sy tolo-kevitra ilaina sy ilaina, avy amin'ny vondrom-piarahamoniny iray manontolo, izay niara-niasa fatratra tamin'ny fampandrosoana sy fanatsarana an'i Jami.
1.2.2 Antso an-tsary
1.2.3 Hafatra an-tsoratra
1.2.4 Hafatra am-peo sy horonan-tsary
1.2.5 Fandefasana rakitra
1.3 Sehatra maro
Jami dia mifantoka amin'ity resaka ity, satria ny fiainana manokana dia zava-dehibe amin'ny rindranasa iray izay mampiasa Internet. Jami dia mamela anao hifampiresaka malalaka sy hitazona ny fiainanao manokana, na amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra, antso an-tsary na horonan-tsary, na fizarana rakitra.
Manaova antso kaonferansa miaraka amina mpandray anjara tsy manam-petra miaraka amin'ny kalitaon'ny feo 48 kHz Opus.
Manome traikefa avo lenta amin'ny antso an-tsary misy famaritana avo lenta (HD).
Tafiditra ao anatin'izany ny fandefasan-kafatra an-tsoratra azo antoka sy voahidy, tsy misy mpizara afovoany amin'ny lampihazo, mampiasa teknolojia tambajotra voazara. Ary miaraka amin'ny fahafaha-mizara fanehoan-kevitra sy fihetsem-po amin'ny fampiasana sary mihetsika emojis sy GIF.
Hafatra am-peo sy horonan-tsary
Manamora ny fandefasana horonam-peo sy rakipeo (rakitsary) amin'ny tsindry iray monja. Mba hanamorana ny hafatra lava na fanehoan-kevitra lava izay misy traikefa nahafinaritra sy mahazatra kokoa an'ny mpampiasa.
Mamela ny fandefasana rakitra multimedia (sary sy horonan-tsary) misy endrika mahazatra tsy misy fetrany fetra eo amin'ireo mpampiasa azy. Misintona ho azy ny fanaovana rakitra .gif, .jpg, jpeg, .png, .webp, .ogg, .mp3, .wav, .flac, .webm, .mp4 ary .mkv.
Na eo aza izany Fampivelarana rindrambaiko maimaimpoana mifantoka amin'ny GNU / LinuxHo fanampin'ity sehatra na Operating System ity dia novolavolaina ho azy izy io mba hovonoina amin'ny alàlan'ireto Operating Systems manaraka ireto:
Android (Finday / TV)
Ho an'ny GNU / Linux Operating Systems dia manana rakitra loharano sy azo ampiharina amin'ny:
ihany koa misy ny trano fitehirizana ny fanaovana fametrahana an-tanana ireo fizarana voalaza etsy ambony, miampy ny Fedora 28 sy 29. Ary ho fanitarana bebe kokoa ny fisehoany na ny fahafahany mametraka dia ilaina ny mitsidika ny wiki ao amin'ny tranokala GitLab: Jami amin'ny Git.
Manolotra tolotra Jami miaraka ny fampiharana, ny sehatra ary ny teknolojia vaovao vokatra tena tsara amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny Free Software. Manaraka ny fenitra mahazatra momba ny fiarovana sy tsiambaratelo ilaina amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny Internet ankehitriny.
Ary ankoatry ny fampidirana ireo fiasa mahazatra amin'ny fandefasana sy fandraisana lahatsoratra, feo, horonan-tsary, antso, antso an-tsary ary fisie misy endrika samihafa, dia eo ambanin'ny tontolo voazara, azo ovaina, mahery, maimaim-poana ary tsy misy doka, mba hanolorany ny mpampiasa azy ny fahatsapana fahalalahana ilaina rehefa mampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Jami: sehatra vaovao ifanakalozana fifandraisana maimaimpoana sy manerantany
Karmen dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana momba an'i Jami.
Valiny amin'i Karmen
Miarahaba anao Karmen! Faly izahay fa tianao ny fampahalalana ary ilaina izany. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Apache Software Foundation dia nanambara ny fampidirana GitHub